बिदेश उड्न ठिक्क परेका यि ९ जनाले नयाँबसपार्कमा बबाल गरे ! २ बच्चाको आमाले गरिन उजुरी - Sano Aawaj
बिदेश उड्न ठिक्क परेका यि ९ जनाले नयाँबसपार्कमा बबाल गरे ! २ बच्चाको आमाले गरिन उजुरी
१५ पुष २०७८, बिहीबार by sanoaawaj
काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका अर्का आरोपी पनि पक्राउ परेका छन्। प्रहरी यसअघि ८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
नयाँ बसपार्कमा एक महिलाले आफूमाथि सामूहिक करणी भएको भनी दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नौ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
महिलाले मंगलबार दिउँसो ३ बजे प्रहरीमा जाहेरी दिएकोमा सोही दिन प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीले बुधबार बिहान ९ बजेतिर एक जना र दिउँसो ४ बजे थप एक गरी अहिलेसम्म नौ जना आरोपी पक्राउ गरिएको जनाएका छन्।
उजुरी परेलगत्तै खोजी र अनुसन्धानमा निस्किएको प्रहरीले त्यसको पाँच घण्टा नबित्दै मंगलबार राति ८ बजे एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीसँगको बयान र थप अनुसन्धानका क्रममा त्यसको तीन घण्टापछि गएराति ११ बजेसम्ममा सात जना नियन्त्रणमा लिएको मैनालीले जानकारी दिए।
उनीहरूले एक गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको पीडितको आरोप छ। उनको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिएको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। पीडित महिलालाई थापाथलीस्थित प्रसूति गृहको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेन्टरमा उपचार गरिएको छ।
पक्राउ पर्नेमा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–१० झाकोटका २३ वर्षीय हिक्मत नेपाली, २२ वर्षीय रतन नेपाली, रोभाका १९ वर्षीय दीपक नेपाली, २३ वर्षीय शिवहरि बुढा, २४ वर्षीय युवराज बढुवाल, वडा– ११ का २४ वर्षीय चन्द्र साउद, २५/२६ वर्षीय हस्त नेपाली रहेका छन्। त्यस्तै, सोही नपा–६ लिउडीका २१ वर्षीय शुरेश सेज्वाल र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका–१२ घर भई कपिलवस्तु बुद्धभूमि बस्ने ४३ वर्षीय गोपालकुमार शिरिष रहेका छन्। चन्द्र साउद र हस्त नेपालीलाई प्रहरीले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो।
बलात्कारमा परेको खबर महानगरीय प्रहरी प्रभाग बसपार्कमा पुगेको थियो। त्यसपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महाराजगञ्ज वृत्त, महानगरीय अपराध महाशाखालगायतबाट प्रहरी टोली खटिएको थियो।
Posted in Breaking news 2, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट
Prevअस्पताल परिसरको गाडीमा बेवारिसे अवस्थामा नवजात शिशु फेला
Nextभक्तपुरबाट काठमाडौँतर्फ जादै गरेको कार दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, दुई जना घाइते